'जुनसुकै हिसाबको योगदान दिन पनि म तयार छु' (अडियोसहित)
Monday, 04 June 2012 13:27	नागरिक
काठमाडौं - प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले 'सहमतिक लागि जुनसुकै योगदान दिन तयार छु,' भन्दै राजीनामाको संकेत दिएका छन्। प्रधान सम्पादक किशोर नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भने, 'सहमतिका लागि मैले जुनसुकै हिसाबको योगदान दिन पनि म तयार छु भनेर मैले पहिला पनि भनेको हो र अहिले पनि भन्छु।' अन्तर्वार्ताको पूर्ण पाठ :
मैले एकपक्षीय ढंगले गरेको पनि होइन। सभामुखको कोठामा पचासौँ मान्छेहरू थिए। प्राय सबै ठूला नेताहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यही, 'अब संविधान सभाको विघठन र चुनावको घोषणा बाहेक विकल्प छैन' भनेरै बाहिरिएको थिएँ।
- नकारात्मकरुपमा सोच्नु हुँदैन। ऐतिहासिक संविधान सभाबाट संविधान निमार्ण गर्न सकेनौँ । यो ठूलो गल्ती त हामीले गरिसक्यौँ। सबै ठूला दलका नेताहरूले यसको जिम्मेवारी लिनु पर्छ। मैले पनि यसको जिम्मेवारी लिँदै क्षमा याचना गरिसकेको छु, फेरि पनि गर्छु।
एकचोटी घोडाबाट लडियो भन्दैमा फेरी घोडा चढ्दै नचढ्ने कुरा त आउँदैन। घोडा चढ्ने नै लड्छ। यसरी बुझेर अगाडि बढ्दा ठिक होला।
तपाईँले 'केहीमा त सहमति हुनुपर्‍यो' भन्नुभयो। चुनाव नगर्ने कुरामा सहमति भयो भने नि?
तपाईँले फेरी 'चुनाव ढिलो या चाँडो' भन्नुभयो?
- तपाँई शब्द शब्दलाई नसमात्‍नुस न। मंसिर ७ को सट्टा ६ हुन सक्छ ८ हुन सक्छ। सबैभन्दा पहिला संविधान सभा विघटन भएपछि चुनावको घोषणा गर्ने वैधानिक काम सरकारको हो। त्यो त संसारको मान्यता हो। त्यो नगरेको भए त म माथि झन् ठूला आरोप लाग्थे। संविधान सभा पनि छैन, चुनावको घोषणा पनि गरेन। कुर्सीमा टाँसिएर सत्ता कब्जा गर्न खोज्यो भन्थे। त्यसबाट बच्न पनि मैले चुनावको घोषणा गरेँ। त्यसको जश पो पाउनु पर्थ्यो मैले। निर्वाचन घोषणा गरेकैले आलोचना गरिनु के त्यो शोभनीय कुरा हो?
राजनीतिक नेताहरूको धारणा के पाउनु भयो त, सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल र अन्य नेताहरूलाई भेट्दा?
- फकाएको होइन। यो यर्थाथ पनि हो र मेरो कन्भिक्सन पनि हो।
०६२/०६३को आन्दोलनताका तपाईँहरूमा जुन समझदारी थियो, त्यो कालान्तरमा क्षय भइसकेको छ। जनताहरू परिवर्तन भन्दा बाहिर जाने मानसिकतामै छैन। त्यसमा पनि तपाईँहरू कचपच कचपच मात्र गरिरहनु भएको छ। त्यसो किन गरिरहनुभएको छ?
- हामी सबै राजनीतिक दलहरूको, नेताहरूको कमजोरीको उदाहरण हुन् यी। भोलि इतिहासले मूल्यंकनको आधारमा अवस्य नै यिनीहरूको विकल्पको खोजी हुन्छ। तर, अहिले हामी जे छौँ सबै मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यो अवस्थामा नेताहरूको मात्रै सबै तर्फबाट आलोचना हुनु राम्रो पनि होइन। जनता निराश छ। यो स्वभाविक पनि हो। म आफैँ पनि चाहन्थेँ 'शान्ति', 'संविधान', 'सुशासन' र 'सम्वृद्धि'। यो चारवटा 'स'लाई मैले आफ्नो लक्ष्य बनाएको थिएँ। पहिला शान्ति र संविधान ल्याउने र त्यसपछिको सम्पूर्ण शक्ति सुशासन र आर्थिक सम्वृद्धिमा लगाउने भन्ने मेरो सोच थियो। तीव्र आर्थिक विकासविना स्थायित्व आउँदैन भन्ने राजनीतिक अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएकोले मलाई थाह छ। यो अन्तरिम कालमा पनि सकेसम्म आर्थिक विकासलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ।
तपाँई आफूपनि 'जंगबहादुर' हुन सक्नुहुन्छ?
- हामी नेताहरू संविधान सभामा असफल भएकै हौँ। त्यसको आत्मलोचना गरेर अगाडि बढ्नुको हामीसँग विकल्प छैन। यो सबै नेताहरूले सोच्नु पर्छ। यदी जिम्मेवार भएर नसोच्ने हो भने नेताहरू रिप्लेस्मेन्ट हुन्छन।
त्यतिबेला तपाईँको हैसियत के हुन्छ?
- जो परिवर्तनको पक्षमा हुन्छन् उनीहरू एड्जस्ट हुन्छन्। अरु विस्थापित हुन्छन्।